केरुंगामा खानेपानी समस्या
बिहान उज्यालो भएपछि घरको काम गर्न व्यस्त हुनुपर्ने यहाँका बासिन्दा खानेपानी बोक्नै व्यस्त हुन्छन् । अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका केरुंगाको समस्या हो यो । यहाँ हिउँद लागेसँगै खानेपानीको चरम समस्या हुने गर्छ । यहाँका बासिन्दा बिहानको समयमा विद्यार्थी, अधवंैशेदेखि वृद्धसम्म पानी बोक्नमै तल्लीन हुन्छन् ।
बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपाल १२२ औं स्थानमा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मुलुकमा नेपालले यस वर्षपनि निराशाजनक नतिजा पाएको छ ।ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार र सुशासन सम्वन्धि सूचकांक २०१७ अनुसार सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न नेपाल अझै असफल देखिएको हो ।
हत्या आरोपित पुन ‘इन्काउन्टर’मा मारिए
व्यक्ति हत्या अभियोगमा प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका गुन्डा नाइके मनोज पुन र उनका सहयोगी सोम आले नेपाल प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’मा मारिएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यरूो (सीआइवी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको कारबाहीमा पुन र आले मारिएका हुन् ।
मविरुद्ध भ्रम फैलाउन खोजियो : डा.केसी
प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आफूविरुद्ध भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै आफ्नो नागरिकता र प्रमाणपत्र सार्वजानिक गरेका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले आफ्नो बारेमा आएको समाचार भ्रामक भएको पनि बताए ।
नेपालगन्जमा जग्गा माफियाको बिगबिगी
भूमिसुधार कार्यालय बाँकेका कर्मचारीको मिलोमतोमा मोही नभएको महंगो जग्गामा कर्मचारी र जग्गा माफियाले थाहै नदिई मोही कायम गरेको खुलासा भएको छ ।
व्यावसायिक तरकारी खेतीमा किसान अग्रसर
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाका किसान भारतबाट तरकारी आयात नियन्त्रण गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न अग्रसर भएका छन् । निर्वाहमुखी तरकारी खेती गर्दै आएका पाणिनी गाउँपालिका–२ पोखराथोक, वडा नम्बर ३ खिदिम र वडा नं. ७ अड्गुरीका कृषक व्यावसायीक तरकारी उत्पादन गर्न लागि परेका हुन् ।
११ महिनामा १२ लाख धार्मिक पर्यटक
चौधरी समूहले नवलपरासीमा निर्माण गरेको शाश्वतधाममा श्रीलंकाबाट ल्याइएको भगवान गौतम बुद्धको अस्तु राखिने भएको छ । उक्त अस्तु शाश्वतधाममा निर्माण गर्न लागिएको बुद्धिष्ट सेन्टरमा राखिने भएको छ । शाश्वतधाम सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको ११ महिनामा १२ लाखले दर्शन गरिसकेका छन् ।
पोखरामा बम बिष्फोट, पत्रकार र प्रहरी घाईते
पोखरामा आज (मंगलबार) बम बिष्फोट हुदा एक पत्रकार र एक जना प्रहरी घाईते भएका छन। पोखराको विजयपुरमा आज करिब ११ः४० बजे बम विष्फोट हुाद पत्रकार घनश्याम पाण्डे र प्रहरी जवान कुलबहादुर खबी घाईते भएका हुन । पत्रकार पाण्डेको घाँटी र टाउकोमा चोट लागेको छ भने प्रहरीको समेत शीररमा चोट लागेको छ ।
व्यक्तिगत लगानीमा करोडको शिवमूर्ति
जिल्लाको धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत लगानीमै करोड बढीको शिवमूर्ति र मन्दिर स्थापना गरिएको छ । बगनासकाली– ८ झिरभञ्ज्यांगका ४६ वर्षका भीम बस्यालले व्यक्तिगत लगानीमा यहाँस्थित शिवासनधाममा नेपालकै ठूलो शिवको मूर्ति स्थापना गरेका छन् । पूजाआजाका लागि मात्र होइन, मूर्ति हेर्नका लागि पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ एक करोडभन्दा बढी लगानी गरेर बस्यालले शिवको मूर्ति स्थापना गरेको बताएका छन् ।
लोकप्रिय बन्दै पैंचोका उत्पादन
तीन वर्षअघि गुल्मीबाट सुरु भएको पैंचो पसल लोकप्रिय बन्दै गएको छ । आफ्नै उत्पादनसहित काठमाडौं, पोखरा, चितवन, हेटौंडा, नेपालगन्जमा पसल सञ्चालन गरिसकेको पैंचोले दाङमा सेवा विस्तार गरेको छ ।
स्थानीय जातका गाईभैंसीमै निर्भर
देशका धेरै जिल्लाका किसान उन्नत जातका गाई भैंसीपालनमा लोभिए पनि पाँचथरमा भने अधिकांस किसान स्थानीय जातकै गाई–भैंसीमा निर्भर छन् । उन्नत जातका गाई–भैंसीले स्थानीयको तुलनामा धेरै दूध दिने भए पनि अधिकांश कृषकका गोठमा स्थानीय जातकै गाई–भैंसी भेटिने गरेका हुन् । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका अनुसार अहिले जिल्लामा ९९ हजार २ सय ७४ स्थानीय गाई छन् । तीमध्ये ३१ हजार ५ सय दुहुनो छन् ।
पछिल्लो समय दाङ महको हवको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । माहुरीपालनका लागि उपयुक्त वातावरण रहेकाले महको हव बन्दै गएको कृषकहरू बताउँछन् । जिल्लामा माहुरीपालनका लागि आवश्यक वातावरण, तोरी खेती, चिउरीको वन, वनमा अन्य विभिन्न प्रकारका फूल फूल्ने भएको माहुरी व्यवसायका लागि उपयुक्त जिल्लामा मानिने गरेको छ ।
बर्खाको पानी संंकलन गरी हिउँदेमा सिँचाइ
पानीको स्रोत पर्याप्त नहुँदा तेह्रथुमको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानले बर्खाको पानी संकलन गरी हिँउदेबाली र तरकारी खेतीमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण गाउँमा भएका पानीका मुहान सुकेसँगै हिउँदेबाली लगाउन नपाएका किसान पछिल्लो समय आकासे पानीलाई संकलन गरी तरकारी गर्दै आएको छथर गाउँपालिका–५ ओख्रेका नबिन लिम्बूले बताए । किसानले प्लास्टिक पोखरी बनाएर पानी संकलन गरी सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना कारोबार गर्ने ८ पक्राउ
नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागबाट वित्तीय कारोबारको स्वीकृति नलिई सर्वसाधारणबाट बचतका नाममा रकम असुली गर्ने ८ जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी)ले मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
केबलकारको भाडा आफूखुसी निर्धारण गर्न नपाइने
देशभर केबलकार निर्माणमा निजी क्षेत्रको चासो बढेसँगै सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमनको तयारी गरेको छ । निर्माण भइसकेका र निर्माणाधिन केबलकारले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न लागिएको हो । यसअघि व्यवसायीले आफूखुसी भाडा असुल्दै आएका थिए । हाल मुलुकभर मनकामना केबलकार र चन्द्रागिरी केबलकारमात्र सञ्चालनमा छन् ।